Qubanaha » Beesha Xawaadle oo xusul Duub ugu jirta Helida Xilka Ra”iisulwasaraha Soomaliya.
Beesha Xawaadle oo xusul Duub ugu jirta Helida Xilka Ra”iisulwasaraha Soomaliya.
Besha Xawaadle oo ka mid ah beelweynta hawiye ayaa waxaa ay xusulduub kii ugu weynaa ugu jirta Sidii ay u helilahaayeen Xilka Ra”iisulwasaraha Soomaaliya iyadoona besha ay si hose u la kulantay Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo hada Xafiiskiisa uu yahay Hotelka Al-jazeera ee Muqdisho.
Odayaasha ,waxgaradka Saraakiisha ,iyo Siyaasiyiinta beeshaas oo kulamo gaar gara ah yeelanaayey, ayaa waxaa la so sheegayaa in aad u doonayaan in Xiligaan iyaga ay helaan Jagada Ra”isulwasaraha Somaaliya madama ay habargdir iyo Abgaal ay horey dalka Jagoyin Sarsare ugu soo qabteen ku na qaadanaayeeyn Magaca Beelweynta hawiye.
Cismaan Cali oo ka tirsan Waxgaradka beesha Xawaadle oo koob joog ka ahaa kulmo dhowr ah oo ay besha yeelatay ayaa waxaa uu sheegay in ay besha hada dadaal dheer u galayan sidii ay ku helilahaayeen Jagada Ra”isulwasaraha Dalka.
Besha xawaadle ayaa waxaa u sharaxan Dr Cabdinuur oo Saaxiib dhow la ah Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo Wasiir na ka ahaa Dowladii Tayo ee Madaxweynaha uu ka ahaa Ra”iisulwasaaraha,iyadoo sidookalena uu jagadaasi u sharaxan yahay Cabdullahi Godax Barre oo isna mucaarad weyn ku ahaa Xasan shiikh Maxamuud.